Maalinta: Diseembar 15, 2016
Shirkadda 5 waxay u soo gudbisay dalab Qandaraaslaha Guryaha Izmir Opera: Waxaa qoray Degmadda Izmir Metropolitan District Karşıyaka'Exit wareega koowaad ee gundhigga dhismaha ee gaarka ah ee dhismaha opera horeysay Turkey ee complete in la aasaaso. Soo bandhigida shirkadda 5 [More ...]
Darawalada MOTAŞ Darawallada MOTA found waxay heleen booqashada taageerada Riot Force: Darawaladayada waxay booqdeen Malatya Riot Force Directorate iyada oo loo eegayo xadka Polis Polisim 'Darawalada MOTAS waxay muujiyeen taageeradooda xubnaha booliiska booqashada khaa'innimada Besiktas ee Istanbul. [More ...]
Shaqaalaha Tareenka ee Elazığ
Shaqaalaha Barafka ee Shaqaalaha Tareenka ee Elazığ: Ka dib markii barafka wax ku oolka ah ee Elazığ, shaqaalaha tareennada ay sameeyaan dadaal weyn si looga hortago carqaladaha gaadiidka. Baraf iyo baraf xad dhaaf ah oo kuyaala Bariga Anatolia [More ...]
Ku tabobarasho haadyada shaqada
Saamiyaasha tareenka ee shaqada: Kuwa tareenka wax ku tuujiya ayaa dadka ku dhex dhiga dhulka hoostiisa sidan oo kale. Cinwaanka sawirradu waa Japan. Tokyo, oo ah mid ka mid ah magaalooyinka ugu dadka badan adduunka, ayaanay suuragal ahayn in la maro tareenka dhulka hoostiisa ah inta lagu jiro saacadaha dadku badan yihiin. Markay arintu sidaa tahay [More ...]
Wakiilo Gaadiidka TCDD Gaadiidka iyo Saadka ee Qeybaha: TCDD wadayaasha, soosaarayaasha tareenada iyo kuwa xamuulka qaada, Saraakiisha UTİKAD iyo DTD ayaa isugu yimid Ankara. 9 [More ...]
Nidaamka Kaararka Aqoonsiga Basaska Gaarka ah ee Bursa ee Xirmay: Bursa 10 tirada dadka ku caan baxay xasuuqii deegaanka iyadoo gubtay dufanka iyo dhaqanka xun ee rakaabka badanaa waxay la yimaadaan fadeexad cusub oo dadweynaha ah! Card [More ...]
3. Mareegta Guryaha Marble ee Garoonka
Naxdinta xawaaladda guryaha gudaha garoonka diyaaradaha: 3 dhisme ayaa socda. Hawlihii loo adeegsaday isticmaalka marbarka guryaha ama dhagaxa dabiiciga ah ee Turkiga ee garoonka ayaa aad u lumay. Qaar ka mid ah shirkadaha wax soo dejiya 'dhagaxa Turkiga waa shucaac sare' isagu [More ...]
Kaararka Visa Socdaalka Kocaeli ee Magaalada Kocaeli Gaadiidka Dalxiiska ee Dheeriga ah: Kocaeli Waaxda Dawladda Hoose ee Gaadiidka Dadweynaha ee loogu talagalay kaarka dhimista ardayda socdaalka 15 Noocyada fiisaha ee bilowdey Noofembar 31 waxay socon doontaa illaa Disembar XNUMX. [More ...]
Mashruuca Izmit Tram mashruuca intee in le'eg ayey tahay
Dhamaadka mashruuca Izmitramramramram: intee in le'eg ayay tahay: Duqa Magaalada Kocaeli İbrahim Karaosmanoğlu, oo u yimid doorashooyinka maxalliga ah isagoo ah murashaxa AKP isla markaana kursi ka ah gudoomiyaha doorashadii deegaanka ee uu galay, [More ...]
RayHaber 15.12.2016 Warbixinta Shirka
Adeegga Daawada Meheradda ayaa la Iibsan Doonaa Xilliga Jiilaalka Websiga ayaa la iibsan doonaa (TÜLOMSAŞ) Adeegga Ijaarka Gawaarida Waa la Iibin doonaa [More ...]
Gaadiidka Eurasian oo la furay maalmo furan
Maalmaha Furitaanka Wadooyinka Eurasia: Ma jiraan maalmo kale oo ka haray Sooriya Eurasia Tunnel, oo isku xira kooxda Aasiya iyo dhinaca Yurub. Fidinta iyo howlaha dayactirka ee tunelada iyo ka bixista wadooyinka [More ...]
Kars Ardahan Iğdır Railways waxay noqon doontaa Waddo
Kars Ardahan Iğdır Railways wuxuu noqon doonaa Corridor: Wasiir Arslan, wuxuu sugayaa Serhat Kars, Ardahan iyo Iğdırn ma ahan oo keliya inay sugaan Serhat, Serhat sidoo kale waa inay ka faa'iideystaan ​​booska markale. Gaadiidka [More ...]
Mashruucyada Tikidhada Istaatistikada ee Istanbul illaa Sanadka (War-Saxaafadeed)